राम मन्दिरको ३७० रोपनी जग्गा गायब | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
राम मन्दिरको ३७० रोपनी जग्गा गायब
प्रकाशित मिति ६ श्रावण २०७६, सोमबार ०९:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । गौशालास्थित राम मन्दिरको ३ सय ७० रोपनी जग्गा गायब पारिएको छ । कमान्डिङ कर्नेल श्रीसनकसिंह टण्डनले १९२८ सालमा राम मन्दिर निर्माण गरी ३ सय ७३ रोपनी ८ आना ३ पैसा जग्गा गुठी राखिदिएका थिए। अहिले मन्दिर परिसरले चर्चेको ३ रोपनी ४ आना जग्गा मात्र छ ।
काठमाडौंका नाङ्लेभारे, लप्सीफेदी र साँखुमा मन्दिरका नाममा रहेको जग्गा सबै मोहीकै नियन्त्रणमा छ । जग्गाबाट खासै आयस्ता पनि आउँदैन। वर्षको २ देखि ३ लाखसम्मको बाली आउने गरेको रामचन्द्र मन्दिर गुठीका सदस्यसचिव केशवध्वज राणाले जानकारी दिए । ‘सबै जग्गा मोहीले कमाएका छन्’, उनले भने, ‘बाली भन्दै कसैले अलिअलि बुझाउँछन् ।’
निजी गुठीबाट सञ्चालन भएको मन्दिर भए पनि जग्गा कहाँ कति छ भन्ने यथार्थ विवरण गुठीसँग छैन । यस्तै जग्गामा कति मोही छन् भन्ने तथ्यांक छैन । सदस्यसचिव राणा भन्छन्, ‘सरकारसँग त विवरण छैन, हामीसँग के हुन्छ ? ’ मन्दिरको आर्थिक स्रोत चन्दा, दक्षिणा, भेटी तथा मन्दिर प्रांगणमा सेवासुविधा दिएबापत विवाह, व्रतबन्धबाट प्राप्त हुने शुल्क मात्र हो ।
किम जोङका सैनिक महिलालाई महिनावारी हुने छुट छैन !
काठमाडौं । संसारको चौथो ठूलो सैन्य शक्ति रहेको उत्तर कोरियाली सैनिक महिलाको कथा फरक छ । सर्वोच्च नेता…
हट र ग्ल्यामरस टाइगरकी गर्लफ्रेन्ड
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुरको विवाह हुँदैछ । अनिल कपुर पुत्री बिबाह बन्धनमा बाँधिदै गर्दा ज्याकी श्राफ पुत्र…
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल वीरगन्जले विद्यार्थीसँग सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा १४…
यति बेला नेपालमा मध्य गर्मी छ । गर्मीयाममा खानेकुरामा निकै सचेत हुनुपर्छ । विशेषगरी राति खाने खानामा बढी ध्यान…
प्रचण्डले मुस्कुराउँदै छोराका हत्यारा छविलाल निर्दोष छन् भनेको सुन्दा गंगामाया भावविहल
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व पुष्पकमल दाहालले फुजेल घटनाका आरोपि छविलाल पौडेल निर्दोष रहेको जिकिर गरेका…
यो कुकुरको टाउकाको मूल्य ८० लाख तोकियो : कारण छ यस्तो !
काठमाडाैं । दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बिया लागु औषध तस्करीका लागि विश्वभर कुख्यात देश हो । त्यहाँ कैयन् लागुऔषध कारोवारीहरु…